Fil d'actualités du 09/09/2020
09/09/2020 - 00:30 : ANTENIMIERANDOHOLONA:Nandroso ny datin'ny 11 desambra 2020 ny CENI mba hanatanterahana ny fifidianana loholona.Nahena ho 18 moa ny isan'ireo loholona ka ny 16 amin'ireo no fidiana.Mpifidy lehibe no mifidy fa tsy ny vahoaka mivantana.
Archive du 20190829
Valifaty politika Raikitra ny adin’ny IRD sy ny HVM
Nosamborina sy naiditra am-ponja eny Tsiafahy i Mbola Rajaonah mpanolotsain’ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina. Nohetsehina ny dosie ka nohelohina higadra sy hiasa an-terivozona i Claudine Razaimamonjy.
Kandidan’ny TIM eto Iarivo Hivoaka amin’ny faran’ny herinandro
Miankina amin'ny fanapahan-kevitry ny filoha Ravalomanana ny filatsahany hofidiana, hoy i Olga Ramalason, sekretera jeneralin'ny antoko TIM.
Fifidianana eto an-drenivohitra Manilika goaika antitra ny IRD
Anarana efatra no efa voatana amin'ireo mivezivezy fa kandidan' ny IRD ho an' Antananarivo Renivohitra, hoy i Hery Rasoamaromaka sekretera jeneralin'ny antoko TGV. Nambarany fa olom-baovao eo amin'ny tontolo politika ny ankamaroan'izy ireo.
Lisi-pifidianana Efa vita ny fanatsarana, hoy ny CENI
Efa azon’ny olom-pirenena jerena eny anivon’ny fokontany ny lisi-pifidianana amin’izao, hoy ny fanazavana nentin’ny teo anivon’ny vaomiera mahaleotena misahana ny fifidianana na ny Ceni. Nisy ny fanatsarana ary efa tonga eny anivon’ny fokontany 192.
Antananarivo Renivohitra Hangotraka ny fifidianana
Hifantoka bebe kokoa amin’ny fifidianana ben’ny tanàna indray ny fiainana ara-politika eto Madagasikara manomboka anio, fotoana hisokafan’ny fandraisana ny antontan-taratasin’ireo kandida.
Heriniaina Razanadrakoto “Nandany vola fotsiny ny lalànan’ny fanoherana”
Ny zava-nisy dia notapahan’ny antenimieram-pirenena ny sata mifehy ny mpanohitra ary iny tsy nahitam-bahaolana teny amin’ny antenimierandoholona iny ka votery naverina eny Tsimbazaza indray,
Kajikajy politika Sefom-pokontany 14 nesorina
Mahatratra 14 ny isan’ireo sefom-pokontany nesorina tamin’ny toerany, omaly.
Fametrahana ny depioten’Ambohidratrimo Tezitra ny mpampianatra fa navezivezy
Tezitra, sorena, sosotra ireo mpampianatra saika hanatrika ny fametrahana ny samboadin’ny depiote IRD voafidy tao Ambohidratrimo, ny sabotsy lasa teo, tao amin’ny kianjan’Ambohidratrimo.
Taratasin’i Jean Tsy misy hofetsenareo
Io indray ianao ry Jean fa mody manao mampalahelo be an ! Sao dia heverinao fa misy hofetsenareo amin’izany ary eo ! Tsy misy io Jean a !
Asa eny amin'ny kaominina Fampandehanan-draharaha sisa...
Namoaka fanapahana mahakasika ny ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny teo anivon'ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC). Hanohy ny fampandehanan-draharaha ireo ben'ny tanàna sy mpanolotsaina manomboka ny 22 septambra izao.
Fihiran’ny ankizy eny amoron-dalana « Mila tandreman’ny fitondrana ! »
Nalaza teo anivon’ny tontolon’ny kanto Malagasy tao ho ao ny fisandratana ankizy mpihira amoron-dalana ho lasa nalaza teo amin’ny tontolon’ny hira sy mozika.
Zatovo noroahina tsy ho miaramika “Nisy nampiasa antontan-taratasy hosoka”
Tsy namono olona, tsy nanary basy, tsy niray tsikombakomba tamin’ny dahalo, sns, nefa dia nahazo taratasy fandroahana izahay.
Tompondakan’ny “Basket 3x3” Fandraisana olo-manankaja no natao
Araka ny efa nitaterana azy teo amin’ity gazety ity omaly dia tafaverina an-tanindrazana omaly alarobia 28 aogositra 2019 tolakandro ny delegasiona Malagasin’ny taranja basikety 3 x 3
Taranja Basikety Nahazo mpitsara iraisam-pirenena
Nahazo Mpitsara Iraisam-pirenena miisa 5 sy « Commissaires » Iraisam-pirenena 2 vaovao hiasa mandritra ny fe-potoana 2019-2021
Taranja Basikety malagasy « Mbola sahirana amin’ny halavana isika. »
Niha tsara ny vokatra eo amin’ny taranja basikety Malagasy tato ho ato, hoy ny teknisianina sady mpanazatra ny MB2ALL, Ndranto Rakotonanahary.
Haingo ambony tsikoko indray?
Nafana ny adihevitra tamin’ilay raharaha fitifirana olona voalaza fa jiolahy, ka samy nanana ny nambarany ny tsirairay.
Fampiakarana ny voka-bary Ilaina ny voka-pikarohana mahomby
Ambentin-teny mandrakariva amin’izao fotoana izao ny hoe “tokony hahavita tena ara-bary i Madagasikara ny taona 2020”.
RAHARAHA FJKM ANALAKELY
Mangataka mba hanakatona vonjimaika ny FJKM Katedraly Analakely aloha ny Pasitera Rasolomanana Jafetra hitrandrahana ny tena marina amin’ny raharaha.
Vidin’ny menaka midangana Nampitandrina ny ANMCC
Misy ireo mpivarotra sasany no manararaotra mampiakatra ny vidin’ny menaka fihinana eny an-tsena, hoy ny avy ao amin’ny rafitra mpanao fanadihadiana momba ny lalàn’ny fifaninanana ara-barotra na ny ANMCC.
NOSYBE SYMPHONIE Hanomezan-danja ny gadona klasika
Hotanterahina manomboka ny zoma 30 septamba ho avy izao ny fankalazana ilay hetsika « Nosy Be Symphonie » izay karakarain’ny « Comité d’Organisation d’Activités Culturelles ».
Olan-drano eto Antananarivo Nanomboka ny taona 2007
Nanomboka ny taona 2007 no niofo tsikelikely notantanina fikambanana anaty fokontany ireo paompin-dranom-panjakana teto Antananarivo, izany hoe,
Tobim-pamokarana rano Hitarina ny any Antsiranana
Vola mitentina 2 miliara Ariary no hatokana amin’ny fotodrafitrasa hanavaozana sy hanitarana ny tobim-pamokarana rano ao amin’ny PK7 Antsiranana.
Angovo sy rano fisotro madio Hisitraka izany ny any Ambovombe
Nampanantena ny depiote Jean Michel Henri fa tsy maintsy ho vita ny tetikasa rano fisotro madio ao amin'ny distrikan’Ambovombe amin'ny taona 2020.
Fivarotam-panafody eto Iarivo Tafahoatra ny elanelam-bidiny
Fanafody iray ihany, mitovy kazarana sy fiaviana, mitovy mpamatsy,
Roa vavy mpanao trafikam-bolamena Niara-nidoboka amin’ireo saika handroba
Nisy olona telo lahy nikasa handratra ireo roa vavy nangalatra bolongam-bolamena.
Ambohimanga Rova Rongony 30 kg saron’ny zandary
Rongony roa kitapo milanja 30 kg no saron'ny tobim-paritry ny zandarimaria nasionaly Ambohimanga Rova ny marainan'ny zoma teo tokony ho tamin'ny 7 ora sy sasany.
Imerimandroso Ambohidratrimo Omby 100 very nandritra ny iray volana
Mirongatra ny tsy fandriampahalemana any amin’ny kaominina ambanivohitra Imerimandroso, distrikan’Ambohidratrimo Avaratra. Omby miisa 100 no lasan’ireo dahalo tao anatin’ny iray volana,